भाषण र उद्घाटन गर्दैमा बित्यो प्रधानमन्त्रीको एकसाता - Karobar National Economic Daily
भाषण र उद्घाटन गर्दैमा बित्यो प्रधानमन्त्रीको एकसाता
query_builderApril 8, 2017 4:58 PM supervisor_accountकाराेबार visibility1041
स्थानीय निर्वाचन र राजनीतिमै केन्द्रित दैनिकी
काठमाडौं: प्रधानमन्त्रीले दैनिक के कस्ता काम गर्लान् ? कहाँ-कहाँ पुगे होला ? कस-कसलाई भेटे होलान ? राजनीतिबारे के कस्ता भाषण दिए ? देशलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउन के कस्ता योजना ल्याए ? यी र यस्तै प्रश्न सर्वसाधारणले उठाउनु स्वभाविक हो ।
तपाईँहरुका यी र यस्तै जिज्ञासा मेटाउने प्रयास हामीले गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो साता के के गरे त? हामीले नियाल्ने कोशिस गरेका छौँ ।
अघिल्लो साताको अन्तिम दिन शनिबार प्रधानमन्त्री कुनै पनि उद्घाटन कार्यक्रम र भेटघाटमा सहभागी भएनन् । उनीसँग राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको औपचारिक भेट भएन भने कुनै पनि कुटनैतिक नियोगका अधिकारी पनि भेट्न आएनन् ।
आइतबार भने प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा मधेसी जातीय समन्वय समाजको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले अगामी बैशाख ३१ गते सहज वातावरणमा स्थानीय निर्वाचन हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले सिंगो देश निर्वाचनमा जुटिसकेको बताउँदै मधेसी मोर्चासँग समेत सहमति गरेर चुनाव गर्ने प्रयासमा आफू निरन्तर लागिरहेको प्रष्टिकरण दिए ।
सोही दिन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १६औं वार्षिकोत्सवको उदघाटन गरे । यस्तै सोमबार मुस्लिम समुदायलाई समानुपातिक र समावेशी ढंगले राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व गराउन आफ्नो पहल जारी राख्ने आश्वासन बाँडे ।
त्यो दिन सरकारी निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले उनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । गठबन्धनले मुस्लिम समुदायको संवैधानिक सुनिश्चितता र विशेषाधिकारको प्रत्याभूति गर्न माग गरेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका मंगलबार स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्नु राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार भएको बताउँदै स्थानीय निर्वाचन भएमा माओवादी केन्द्रको जित हुने बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु नै माओवादीको जित हुने भन्दै उनले अफना कार्रयकर्तालाई निर्वाचनमा होमिन आग्रह गरे ।
बुधबार प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै पनि औपचारिक भेटघाटमा गएनन् । बिहीबार भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा सहभागी भए । उनले पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखेका थिए ।
बैठकमा स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भुमिका, मधेसी मोर्चासँग सहमतिका लागि भइरहेको प्रयास र आफ्नो चीन भ्रमण लगायत बिषयमा जानकारी गराए ।त्यही बैठकमा उनले सरकारको वरियतामा राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई आफूपछि पहिलो स्थानमा राख्ने जानकारी दिए ।
साताका अधिकांश दिन प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक भाषण वा भेटघाटमै समय बिताए । देशलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउने कुनै कार्यक्रममा उनी सहभागी भएनन् ।
सोही दिन प्रधानमन्त्री दाहाल माइती नेपालको रजत जन्मोत्सव समारोहको उद्घाटनमा पुगे । त्यस कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले यो निर्वाचनमार्फत् महिला अधिकार संस्थागत हुने जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिला, दलित, मुस्लिमलागायत उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी नयाँ संविधान जारी भएको बताउँदै सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने र महिला अधिकार संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई सफल बनाउन सरकार लागिपरेको बताए ।
शुक्रबार उनी कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार भने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । उनले आज संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरुसँग भेटघाट गरे ।
भेटमा उनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि महिलाहरु तल्लो तहदेखि नै नेतृत्वमा आउने बताए । उनले महिला अधिकारमा अबको निर्वाचनपछि फड्को मार्ने बताउँदै स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि पोषणलाई महत्वपूर्ण विषयकारुपमा समावेश गरिने बताए ।
यस्तै आजै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल आँखा अस्पतालको ४३ औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल आँखा अस्पताल परिसर त्रिपुरेश्वरमा प्रधानमन्त्रीले अस्पतालद्वारा निशुल्क शल्यक्रिया गरिएका ४३ जना आँखाका बिरामीको पट्टी खोली वार्षिककोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् ।
त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भएलगत्तै रिपोटर्स क्लब नेपालको १९ औ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उदघाटनमा उनी पुगे । त्यहाँ पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा उनले मन्तव्य दिए
त्यसबारेमा न कुनै विज्ञसँग नै छलफल गरे । साताभर उनी सहभागी कार्यक्रमका विषयबस्तु स्थानीय तहको निर्वाचनमा नै केन्द्रित थियो । उनले सात दिनमा दिएका भाषण पनि अधिकांश दोहोरिएका थिए ।
स्थानीय निर्वाचन उद्घाटन भाषण